Nhau - Runako rweChina uye indasitiri yekugadzira misoro yakagadzira kuita indasitiri inosanganisira yakakura ……
China yekunaka uye yekugadzira bvudzi indasitiri yakagadzira kuita indasitiri inosanganisira dzakasiyana siyana minda, kusanganisira kuveura misoro, runako rwechinyakare, runako rwekurapa, dzidzo nekudzidziswa, kushambadzira kwepamhepo nekushambadzira uye mimwe minda yakasiyana. Pakupera kwa2019, chiyero cheChina chorunako uye indasitiri yekugera bvudzi yasvika 351,26 bhiriyoni yuan; zvinotarisirwa kuti chikamu chemusika cheyekunaka kweChina uye indasitiri yekugera bvudzi ichachengetedza huwandu hwehuwandu hwehuwandu hwe4,6% mumakore mashanu anotevera, uye ichapfuura mazana mana emabhiriyoni yuan na2022.
Runako saloni nderwe-kune-mumwe, kana kunyangwe akawanda kune imwe sevhisi modhi. Basa rese idiki, nevakadzi semuviri mukuru. 2020 yakakanganiswa neCOVID-19, iyo indasitiri yekugadzira bvudzi yekutanga yakakanganiswa zvakanyanya. Nekudaro, sezvo indasitiri yebvudzi iri yakaoma indasitiri inoda, kudikanwa kwekugerwa bvudzi nekugadzira bvudzi kuri kuramba kuchikurumidza nekuuya kwekutangazve kwebasa uye nemafungu ekuparadzaniswa kwemisha. Kune rimwe divi, masangano erunako akatamburawo kurasikirwa nemaroja uye nemitero yevashandi munguva yedenda.
Muna 2021, ramangwana rekuvandudza kweyekunaka uye yekugadzira bvudzi indasitiri ichaenda kune "Internet" bhizinesi modhi, iyo inopesana nevhudzi kurasikirwa uye zvigadzirwa zvekuchengetedza bvudzi ichave inopisa kupisa nzvimbo; runako rwekurapa runowanzo kuve "mhando yakajeka yekurapa runako" mhando; kusangana kweindasitiri yerunako kuchawedzera, uye iyo indasitiri inozowanzo kuve nyanzvi.
Post nguva: Kubvumbi-05-2021